IThekhnoloji yokuguqulela kwi-Biodiesel okanye i-SVO
Car Tech Ukufaka & Ukuphucula
by UJeremy Laukkonen
Ukuguqula injini ukuqhuba kwi-biodiesel, okanye ioli yezolimo, kulula kakhulu kunokuguqula i-injini ye-petroli ukuba isebenze kwi-ethanol. Enyanisweni, kuxhomekeka kwisithuthi sakho, akufanele uyenze nayiphi na into yokuguqula. Ekubeni i-petroleum diesel ibe yinto eqhelekileyo kwiinkulungwane kunye nokutshintshwa, kwaye iziseko zepetroleum-fuel based-based everywhere, i-mystique ethile iphakanyisiwe malunga nombono we-biodiesel, kodwa imeko yinto elula kakhulu kunokuba abantu abaninzi bacinga.
Enye yezinto ezikhangayo kakhulu nge-injini injini kukuba akufanele iqhube kwi-diesel fuel. Oko kukuthi, iinjini ze-dizeli zaza zenzelwe ukuqhuba kwiindidi ezahlukahlukeneyo zombane, kwaye emva koko i-diesel dielel yaba yinto evamile. Namhlanje, i-biodiesel iya kuba yinto exhaphakileyo kunyaka ngamnye odlulayo, kwaye abantu baphendukela kwezinye iifutha ezinjengamafutha, ukuqhuba kwiimoto zabo ze-diesel.
Umehluko phakathi kweDisel, i-Biodiesel, kunye neOyile yokuCoca
Nangona iinjini ze-diesel zingakwazi ukuqhuba ngeendlela ezihlukahlukeneyo zendiza ezahlukeneyo, ezi zintathu zikhethiweyo zenziwa yi-diesel eyenziwe nge-petroleum, i-biodiesel eyenziwe kwimveliso yezilwanyana kunye nezilwanyana kunye neoli efanelekileyo yemifuno okanye i-fat oil.
I-Diesel, okanye i-petrodiesel, iyona mafutha amaninzi aqhelekileyo avela kwizikhululo zegesi, kwaye yiyiphi imoto ye-diesel yanamhlanje eyenzelwe ukuqhuba. Yimveliso yepetroleum, njengepetroli, eyenza ibe yimfuyo.
I-Biodiesel, ngokungafani ne-dizeli eqhelekileyo, yenziwa kwi-oil plant evuselelekayo kunye namafutha esilwanyana. Ngaphandle kweemeko ezifanelekileyo, isebenza ngokufanayo ne-petroleum diesel, ngoko unokuyiqhuba malunga neseyiphi injini ye-diesel engenanto yokuguquka kwenkqubo.
I-caveat ephambili kukuba i-biodiesel ecocekileyo ayenzi into enkulu ebusweni bomoya, kubangelwa ukuba kuthengiswa ngokufana nokudibanisa ne-diesel evamile. Ngokomzekelo, i-B20 iqukethe i-20% ye-biodiesel kunye nama-80 ekhulwini e-petroliyoli. Kukho ezinye iimeko zokuqhuba i-biodiesel ngqo kwiinjini ezithile, kodwa siya kuthintela emva koko.
Ioli efanelekileyo yemifuno (SVO) kunye nenkunkuma yeoyile yemifuno (i-WVO) yinto efana nayo. I-SVO yintsha, ioli ye-vegetable engasetshenziswanga, kunye ne-WVO ngokuqhelekileyo ioli epheka efunyenweyo kwivenkile yokutyela. Nangona kunokwenzeka ukuqhuba injini ye-diesel kwioli yokupheka entsha ethengwayo kwivenkile, into eqhelekileyo-kunye neendleko ezinokusebenza-ukufumana ioli esetyenzisiweyo kwiindawo zokutyela. Ioli kufuneka ihlulwe ngaphambi kokuba isetyenziswe njengamafutha. Olunye mgangatho wokuguqulwa luyafuneka kwakhona ngaphambi kokuba usebenze ngokukhuselekileyo injini yesimodeli yanamhlanje kwioli yokupheka.
Ukuguqula iInjini ukugijima kwi-Biodiesel
Kwiimeko ezininzi, akufanele uyenze nayiphi na uhlobo lokuguqula okanye ungeze nayiphi na iteksi eyongezelelweyo kwimoto yakho ukuyiqhuba kwi-biodiesel esikhundleni se-diesel eqhelekileyo. Imixube esuka kwi-B5, nge-5% ye-biodiesel, kwi-B100, ne-100 pesenti ye-biodiesel, iyafumaneka, kodwa uya kufuna ukukhangela ukushicilelwa okulungileyo kwiwaranti yakho phambi kokuba uzalise. Abanye abavelisi ngoku baya kuqhutyelwa kwi-injini ye-warranty e-B20 okanye ngaphantsi, okubhekisela kuma-20 ekhulwini okanye ngaphantsi kwe-biodiesel, kodwa iyahluka kwi-OEM enye ukuya elandelayo.
Enye into ebalulekileyo ukuba uqaphele xa ukuguqula ngaphezulu kwi-biodiesel kukuba i-biodiesel inokuthi iqulethe imitha ye-methanol, eyisisombululo esinokutshabalalisa nayiphi na ipopu yeerubha okanye iimpawu kwi-fuel system yakho. Ngoko ukuba isithuthi sakho sisebenzisa nayiphi na irubha kwi-fuel system, kubalulekile ukutshintshela kwizinto ezingayi kuphala xa ugcwalisa itanki yakho kunye ne-biodiesel.
Ukuguqula iInjini ukugijima kwiOyile yokuPheka
Indlela elula yokuguqula i-injini ye-diesel ukuqhuba ngeoli yokupheka kukuthenga ikiti eyenzelwe ngokufanelekileyo isithuthi sakho, kodwa kukho izinto ezimbini ezibalulekileyo ezifunekayo. Umcimbi wokuqala kukuba ioli yokupheka iyancipha xa ikhuni, kwaye enye leyo isetyenziswa ioli epheka iqukethe ubuninzi kunye neengqimba.
Umbandela wokuqala ukhankanywe ngeendlela ezimbini: ukuqala nokuyeka injini kwidilesi eqhelekileyo okanye i-biodiesel, kunye nokufudumeza ukutshisa ioyile yemifuno ngaphambi kokushisa.
Ngaloo nto, iingcinga ze-SVO kunye neWVO zokuguqula ziza kunye ne-tank fuel to holdary oil cooking, imizila yamanzi kunye neendvayi, izihlunu, i-heaters kunye nezinye izinto ezifunekayo ukwenza inkqubo yokuguqulwa.
Enye imbandela iqwalaselwe ngokuphambi kokucoca ioli ephekayo, oko kuthetha ukuba kufuneka ucofe ioli ngokuyifumana kwisityela sokutyela. Emva kokuba ioli sele ihlanjwe ngesandla kwaye ifakwe kwitankayi yokuncedisa, iya kuhlanjululwa ubuncinci ixesha elilodwa ngefayile ekhompyutheni ofuna ukuyifaka kwinkqubo.
Ukuguqula iOyile yokuCoca kwi-Biodiesel
Ukuba uguqula injini ukuqhuba kwi-biodiesel ngokutshintsha iifowuni ezimbalwa zepetroli zivakala njengengcamango engcono kunokufakela itekiti yokuguqula iyonke, kodwa ingcamango yefriji yamahhala evela kwiindawo zokudlela zendawo ilungile kakhulu ukuba ivumeleke ukuba ihambe, ngoko kubekho ukuguqula ioli kwi-biodiesel inomdla.
Nangona kunokwenzeka ukuba wenze i-biodiesel yakho ekhaya ngaphandle kwe-SVO, le nkqubo ayilula, kwaye ibandakanya izinto ezinobuthi ezifana ne-methanol kunye ne-lye. Ingcamango eyintloko kukuba i-methanol, njengoluhlu lwe-solvent, kunye ne-lye, njenge-catalyst, isetyenziselwa ukuqhekeza iintambo ze-triglyceride kwi-SVO kunye nokudala i-facsimile efanelekileyo ye-biodiesel. Xa isetyenziswe ngokufanelekileyo, umphumo obangelwayo ungasetyenziswa njenge-biodiesel rhoqo. Nangona kunjalo, kubalulekile ukukhumbula ukuba imitha ye-methanol isenokuhlala, enokuyingozi kwaye ingonakalise nayiphi na into eyenza i-rubber kwi-fuel system.
Ukuguqula kwi-Biodiesel okanye iOilly Vegetable Oil
Amaxabiso edizili kunye ne-biodiesel ayashintsha, kodwa kukho ezinye izizathu ezingekho kwezoqoqosho ukuguqula injini ukuqhuba kwi-biodiesel okanye i-oli efanelekileyo yemifuno. Ingaba le ngcamango ukuqhuba uphethiloli olusisigxina, sebenzisa iifowuni zamahhala kwiindawo zokutyela zendawo, okanye ulungiselele xa i-SHTF, into ephezulu malunga neenjini ze-diesel kukuba ukuguqula ukuqhuba kwi-biodiesel okanye i-oli yemifino yinto ethile malunga nabani na izixhobo ezifanelekileyo kunye nokuthambekela kunokukwenza kwindlu yabo yangasese.
Isizathu sokuba Ufanele ubeke i-Speakers Car yakho
Ngaba ndiyakwazi ukucoca i-amps ezimbini okanye ngaphezulu, okanye ngaba ndiphela kumnye?
Iyintoni iModululator ye-In-Car FM?
Ngaba Ndifuna I-Car Amp Fuse?
I-Subwoofer Amplifier ehambelana neBassoming Bass
Ngaba ndifuna i-antenna ekhethekileyo yokufumana i-radio yomsakazo?
Gcwalisa isandi sakho nge-Subwoofer
Ukukhetha i-Amp ye-Right for Car yakho okanye iloliwe
Fumana iNyunithi yeNtloko epheleleyo
I-Groupon: Yintoni i-Groupon kwaye iSebenza njani?
Indlela yokuvula ifowuni yakho ye-Android ngeFitbit yakho
Indlela yokufumana i-Mozilla ye-Thunderbird Plain Text Imeyili Yokubonisa
Indlela yokwenza ukuphuculwa kwe-OS X Mavericks
Indlela yokwabela ukufikelela kwiAkhawunti yakho yeGmail
Indlela yokudala uLuhlu lweMeyili kwi-Yahoo Mail
Desktop yedeskto ye-Mac: Custom Windows Faka
Phrinta, Yabelana, Susa iifoto kwi-iPhone Photos App
Ndingayilanda phi iWindows 98?
10 Iingcebiso Zamacebiso kubaposisi
IiPhonemesi ezisisiseko kunye ne-Lip-Synching for Animation
Oko Okufuneka Ukwazi NgeNetscape 7.2, ngakumbi apho Uyakuyilanda khona
Isingeniso kwi-BPL - I-Broadband Over Power Lines
Indlela yokucima imiyalezo evela kwi-iPhone yakho
Yintoni I-Retweet Ethethayo?
Indlela yokuhlaziya ulwazi lwe-Akhawunti ye-ID ye-Apple
Ukumisela isiVumelwano soMgcini-mali
UMzalwan 'we-MFC-J650DW Inkcazelo ye-Inkjet Yonke-in-One Printer
Izikhokelo zokwenza iifowuni ze-Skype zamahhala ezivela kwifowuni yefowuni
I-10 Eyona Mhlawumbi Yengcashiso Yimali Yangaphandle
Ukufakela Vs. Ukudibanisa iiVideos kwi-Powerpoint
Iimidlalo ezi-7 eziPhambili zoMdlalo weeRaji zokuThengwa kwe-PS4 ngo-2018